फ्रान्सबाट स्विजरल्याण्ड,7जंगली प्रकृति को स्पट, शांत तालहरू, र मंत्रमुग्ध महलहरू तपाईंको यूरोपमा सब भन्दा यादगार बिदाको फोटो एल्बमको अंश बन्न पर्खिरहेका छन्. त्यसैले, प्याक प्रकाश र तपाईं संग केवल सम्झनाहरु र कथाहरु लाई राख्न तयार रहनुहोस्, तपाईं एक नयाँ रोमांच मा शुरू रूपमा, र कम यात्रा पथहरू हिंड्न.
तपाईं गुलाबी र आकर्षक क्षेत्र को राजधानी मा आफ्नो आधार बनाउन सक्छ, टूलूस, वा Albi को आकर्षक शहर. दुबै पिटेको मार्ग बाट अद्भुत छन् शहर ब्रेक फ्रान्स मा र अब लामो साहसिक र फ्रेन्च छुट्टी. तपाईं सजिलै र आरामसँग टूलूजमा पुग्न सक्नुहुनेछ रेल यात्रा द्वारा पेरिस र बार्सिलोना को बारेमा मा5घण्टा.
हलस्ट्याट गाउँ चित्र-उत्तम गाउँ हो कि ताल हलस्ट्याटमा अवस्थित छ. वसन्त मा, गिर, वा जाडो, यो वर्षको कुनै पनि मौसम मा एक पूर्ण स्वर्ग हो, एड्रेनालाईन उत्साही यात्रीहरूको लागि धेरै आउटडोर गतिविधिहरू प्रस्ताव गर्दै. वा यसको विपरितमा, यदि तपाइँ तालको मदिरा वा वाइनको साथ शीतल गर्ने सपना देख्दै हुनुहुन्छ डु ride्गा सवारीमा ताल वरिपरि, हलस्ट्याट आदर्श गन्तव्य हो.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, यो पिटेको ट्र्याक शहर बन्द छ लुकेको रत्न युरोपमा loveliest देशहरू र एक यात्रा लायक लायक!
सहर विभाजित छ3क्षेत्रहरु: पुरानो सहर, दक्षिण, र पोर्ट, जुन बिभिन्न संस्कृतिहरू र विश्वभरिका मानिसहरूका लागि घर हो. त्यसैले, यो पाक स्वर्ग हो, तपाईको मनको इच्छाहरूको सेवा गर्ने. संग्रहालयहरु, ठूलो बजार, cathedrals, शीर्ष पायदान रचनात्मक फेशन डिजाइनर, राजधानीबाट केवल एक घण्टा टाढा छन्, रेल बाट.
सुन्दर Lucerne महान आधार को लागी दिन यात्राको आल्प्स लाई, र अझैसम्म यात्रुहरूले पत्ता लगाएका छन्. त्यसोभए तपाईंले यसको रमाइलो गर्ने अनमोल मौका पाउनुहुनेछ र पिटिएको मार्गबाट ​​स्विट्जरल्याण्डको अन्वेषण गर्नुहुनेछ. ड्र्यागन मार्गमा हिंड्नुहोस् र रोप पार्कमा तपाईंको शक्ति परीक्षण गर्नुहोस्, जुन दुबै उत्कृष्ट आउटडोर गतिविधि लुसारिनका वरपर छ.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा पिटेको पथ गन्तव्यहरूको बाहिर” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Foff-beaten-path-destinations-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
एन्ट्वर्प सिटीब्रेकयोरोप अफबेटेनपाथ offthebeatenpath रेल यात्रा traintravelaustria traintravelfrance यात्रा यातायात स्विट्जरल्याण्ड